Col. Bare: war xumow lagu waa! | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Col. Bare: war xumow lagu waa!
Col. Bare: war xumow lagu waa!
Col. Bare Hiiraale oo muddo sannad ka badan ku sugnaa deeggaanka Goobweyn ee duleedka magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah ugu biiray wadahadalada nabad raadinta Jubbooyinka iyo Gedo wuxuuna aqbalay waanwaan ay dawladda Soomaaliya iyo urur gobolleedka IGAD dhexdhigeen isaga iyo masuuliyiinta gobolladaasi.
Bare Hiiraale ayaa sheegay in uu ciidamaddiisii dib ugu celiyay gudaha Kismaayo sidoo kalena uu la kulmay madaxweynaha maammulka KMG-ka ee Jubaland, Sheekh Axmed Madoobe si loo soo afjaro colaadaha ragaadiyay Jubaland.
“Waxaanu soo xirnay albaabkii colaada waxaana dib u furnay kii nabadda.” Ayuu yiri Bare oo warbaahinta kula hadlayay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Dhinaca kale, ra’iisalwasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo Muqdisho kula kulmay Col. Bare Hiiraale ayaa boggaadiyay go’aanka uu qaatay Bare, wuxuuna ku tilmaamay mid wanaag iyo guul u horseedaya shacabka reer Jubaland iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya.
21-ka bisha soo socota ayaa lagu wadaa in shir dib u heshiisiin ah lagu qabto magaalada Kismaayo, halkaasoo ay imminka kusii qulqulayaan ergo ka kala socota seddexdaasi gobol.
Previous articleBarakac ka socda gobolka Sh/hoose
Next articleMuqdisho: Shabaab oo xarumo weeraray